#ABCDeebisaa Jijjiirraa tartiiba qubee ilaalchisanii #Mormii Hayyoota Oromoo -
Dr. Eshete Gemeda
Afaan saba tokkoo mallattoo saba sanii qofa osoo hin ta’in, jireenya fi eenyummaan isaatiifis hundeedha. Aaadaan, dhuudhaan, sabboonummaanii fi ofitti-amanuun afaaniin alatti jiraachuu hin danda’an. Akka saba tokkootti teknolojiidhaan guddatanii addunyaa keessatti oflaaluun afaan irratti kan hundaa’edha. Yoo afaan saba tokkoo qancaraa (stagnant) ta’e, yookaan ammo yoo du’aa deeme, sbani sun hin jira jechuun nama dhiba.
Duulli roorriftoonni Abashaa waggaa 145 guutuu Afaan Oromoo balleessuf godhaa turan, kan ammas godhutti jiran, kanaan alatti kan laallamuu miti. Duulli ardha Woyyaaneenii fi kittillayyoonni isii afaan, aadaa fi duudhaa Oromoo balleessuuf godhaa jiran kun, akkuma baratame “Oromummaa haquu” irratti kan xiyyeeffate waan ta’eef, tarkaanfii asiin booda ummanni Oromoo fudhatuuf Woyyaanetu ittigaafatama.
Sirna Woyyaanee dukkanaawaa bifa “Apartaayidiitiin” (Apartheid System) bocame (designed/structured) kana keessatti, balaan kana jedhamee himamuu hin dandeenye baa’etu ta’e. Woyyaantonni bifa bineensaa kan dhiiga saba keenyaa dhangalaasuu malee akka ilma namaatitti nama waliin jiraachuu hin dandeenye, dhiigaan machaa’uudhaan raatiinsa tokko irraa gara raatiinsa biraatti tarkaanfachuu ittifufaniiru. Yammu kana godhan hundumaa, kan meeshaa ta’uudhaan duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti akka raawwatamu kan godhan, hooggantootaa OPDOti.
Kan qabeenya Oromoo saamee Woyyaanee saamsisiisu OPDOdha, kan ilmaan Oromoo lafa isaanii irraa buqqisee alagaa dhaalchisu OPDOdha, kan mana mana irra deemee saba Oromoo ajjeesee ajjeesisiisu, OPDOdha, kan diinaa tumsee lammiiwwan keenya man hidhaatti guru OPDOdha, kan Woyyaanee fira godhatee, ilmaan Oromoo kan kumaatamatti laakkawaman biyya isaanii keessaa baqachiisu OPDOdha, kan Woyyaanee gargaaree hayyoota Oromoo hojii irraa ari’u OPDOdha, kan hayyoonni keenya hojii dhabanii, hiyyummaa jalatti kufanii dhakaa falaxan godhe OPDOdha. Gabaabbinatti, diina aangomsuudhaan ilmaan Oromoo akka biyya isaanii keessatti gidirffaman kan ulee ta’ee Woyyaaneen akka dalluu baaftu godhe hooggantoota OPDOti. Kanaafuu, hooggantoonni Jaarmayaa maxxanaa kanaa Oromoodha jechuun nama dhiba. YOMA KUNIS TA’E, WANTI OPDO IRRATTI DUULUU IRRAA OFQUSANNUUF, WAAN SABBOONTONNINII fi GOOTONNI QAQAALIIN SABA OFIITIIF QUUQAMAN JAARMAYAA KANA KEESSA JIRANIIF.
Akkuma asiin dura barreeffama darbe irratti kaasetti, wanti Obboo Lammaa Magarsaa afaan damma dibatee Ummata Oromoo haasa’uu fi gidiraan duubaan (harka lafa jalaatiin) ummata Oromoo irratti hojjatamu walfaallessa.Yeroo hundumaa haasawa isaatiin booda gidiraan Woyyaaneen saba keenya irratti raawwattu hammaachaati deema. “Afaaniin Sheik Husseein jedhaa, harkaan gara mukaa,” jedha Oromoon yoo mammaaku. Fuula bifa lamaa qabu muldhisuudhaan abbaa fakkaachuun hin danda’amu.
Ummata Oromoo burjaajessanii, injifannoo hamma ardhaatti karaa “Afaan Oromootiin” argame kana “suuta suutaan” balleessuuf jecha, “Qubee Afaan Oromoo” kan waggoota 27 ittiinbaratamee, ittiinhojjatame jijjiiruun, akka hooggantoonni OPDOtii fi Woyaaneen ummata keenya balleessuuf murteeffatan agarsiisa.
Dargiin ummata Oromoo garboomffachuuf jecha, tooftaa baafatee “Labsii Lafaa” (Land Proclamation) lallabe. Yoo isa kana godhu, sabni Oromoo dachee ofii dhuunfatee injifannoo dhiigaan argate san hin mirkaneeffata (hin eeggata) jedhee hin yaanne. Kanaafuu, “suuta suutaan” lafa Oromoo deebisee nafxanyoota kennuuf jecha, “Quphsiisa Gandaa” (Villagization) jedhuudhaan, ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqisee. Sirna dukkanaa Haile-Sellaasee deebisee, ummata Oromoo hiyyoomsee, balleessuuf jecha, osoo asiif achi raata’u, ofiifuu duguugamee manca’e.
Ardhas wanti mootummaan Tigree “Afaanii” fi “Aadaa” Oromoo irratti hojjachaa jiru kanuma. Lafti kan ummataati erga jedheen booda, maqaa “Investmentii” (Investment) jedhamuun lafti Oromoo saamameera. Kunis issa hanqatee (quubsuu dadhabee), “Maastar Pilan” (Master Plan) jedhee Oromummaa balleessuuf erga saganteeffateen booda, wareegama saba keenya gootichaatiin shirrii diinaa kun fashalaayeera.
Akkum “Labsii Lafaa” kan bara Dargii san, “OPDOnii fi Woyyaaneen, “Qubee Afaan Oromoo” sadarkaa “Elementarii” (Elementary level) iraa hanga Yuniversiititti, akka baratamu seeraan murtaa’ee, wagoota 27 guutuu ittiinbaratameera.
Akkuma Dargiidhaa, Woyyaaneenii fi hooggantoonni OPDO yoo kana godhan, “Afaan Oromoo” akkanatti guddatee, addunyaa guututti beekkamee, bakka olaanaa nigaya, jedhanii hin tilmaamne. Haalli kun muddama guddaa keessa isaan galcheera. Erga “Qubeen Afaan Oromoo” hojii irra oolee eegalee, yeroo kudhan jijjiirraan irratti godhhameera. Yeroo kana hundumaa wanti “Oromummaa fi sabboonummaa cimsu” “Kaarikuleemii” (Curriculum) keessaa akka baduu danda’u harka lafa jalaatiin irratti hojjatamaa tureera. “THE OROMOO LANGUAGE IS NOT OLY SUPPRESSED, BUT ALSO MUTILATED.” Qubee Afaan Oromoo irrattis duguuggatu raawwatamaa jira jechuudha.
Akkuma sila jedhe, Woyyaaneenii fi ergamtonni isiidhaa, kallattiidhaan Qubee Afaan Oromoo akka badu godhuu waan dadhabaniif, tooftaa biraa yaaluu qaban. Akkuma Dargiidhaa harka lafa jalaatiin Afaan keenya balleessuuf yookaan akka hin guddanne “qancarsuudhaaf” (to reduce it to nominal existence and/or stagnant level) baldhinaan akka saganteeffatan karaa adda addaatiin irra gayameera.
Afaan hundeen isaa “Laatiina” ta’e (Latin originated Language) addunyaa guututti, “Qubee” “A/a” jedhuun jalqaba. Afaan Oromoollee “Afaanota Addunyaa” kan uumamni isaanii “Laatiina ta’een” addatti laallamuu hin danda’au.
Sabni Oromoo Afaan isaa kan alagaan jala balleesse deebiffachuuf jecha, wareegama kana jedhamee himamuu hin dandeenye kafaleera. Sabboontonninii fi hayyoon qaqaallin sababa kanaaf dararamanii ajjeefamaniiru. Akkuma “Lafa Oromoo,” dubbiin “Qubee Afaan Oromoottis” “dubbii jireenyaa fi du’aati.” Woyyaaneenii fi dabballoon isii kan waan godhan hin beekne, Qubee Afaan Oromoo kan dhiiga ilmaan Oromootiin jiraachuu danda’e, jijjiiruuf mirga hin qaban. Akka ardha dabballoonni Woyaanee “Soofaa Garbummaa” irra gaangalachaa qoosan osoo hin ta’in, Qubeen Afaan Oromoo du’a jalaa ba’ee bakka amma jiru kana ga’uu kan danda’e, qorannaan waggoota dheeraa fudhate godhameeti. Diinni dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqate, waa’ee guddina afaaniititti irkkachuudhaan, dhaloota haarawa “maataan bilisoome” burjaajessuuf raata’uu dhiisuu qaba. Woyaaneenii fi hordoftoonni “Goobana Dacee” osoo ummata keenya tuttuquu irraa ofqusatanii isaanii woyya. “LUKKUUN HAATEE HAATEE, ALBEE ISII QALU BAATI,” jedha Oromoon yoo mammaaku. Akka saree maraattee raata’uun kun “SUNAAMII FIDUUN ISAA WAAN HIN OOLLE.”
Akkuma armaa olitti tuqeetti, Qubeen Afaan Oromoo kan waggoota dheeraa hojii irra oole kun, hayyoota Oromootiin qorannaan olaanaan irratti godhameeti. Inni kun ammo hamma ardhaatti milkaa’ina gudddaa argamsiiseera. Akkuma baratame, Woyyaaneenii fi lukkiileen isii jireenya Oromootii fi waan saba kana guddisu maraa balleessuu irratti cichanii hojjachuun, sagantaa isaanii kan duraa godhataniiru. Oromummaa fi waan Oromoon qabdu hunda diiguuf dhakaan isaan garahingalchin hin jiru. Dabballoonni Woyyaanee kan shiraan leenjifamanii maqaa Oromootiin daldaluudhaan dalluu baasan, hojiin isaan irratti bobba’an kanuma. “Ilmaan hattuun oomishte mataa boruuf ittiinyaadan hin qaban.” “THIS IS the TRAGEDY of the ROBOTIC PEOPLE.”
Jijjiirraa Tartiiba Qubee Afaan Oromoo” iilaalchisee, sababni warri waa’ee kana irratti hojjatan dhiyeessan, waan hundee hin qabne. Qorannaan isaan goone jedhanis soba akka ta’e mulddhateera. Afaan saba tokkoo guddisuuf “Tartiiba Qubee” afaan sanii jijjiiruun barbaachisaa miti. Woyyaaneenii fi dabballoonni isii tapha amma taphatan kan yoo qopheessan, xiyyeeffannaan isaanii – DAA’IMMAN OROMOO AFAAN ISAANII KAN DHALOOTAA JIBBISIISANII KOOMEE DIINA JALATTI AKKA KUFAN GODHUUDHA. Shiftoota dhiigni macheessee hin galu malee, dhaloonni keenya haarofni, garbicha “Afaan” ofii hin qabne ta’ee, “Afaan Ergisaatiin” (borrowed language) hidhamee, booji’amaa diinaa akka hin taane, wareegama olaanaa kafalee muldhiseera.
Afaan Oromoo guddisuudhaaf “Tartiiba Qubee” jijjiiruu osoo hin ta’in, “AADAA, SEENAA, DUUDHAA, SAFUU fi SABBOONUMMAA” Oromoo irratti kan hundaa’e qorannaa “SAAYINSIFFAA” (Scientific Research) godhuudha. Qorannaan akkanaa kun yoo godhamu, duraan dursee, wanti barbaachisu inni duraa, waan armaa gadii kanniin (kanneen) xiyyeeffannaa keessa galchuudha:
1. hawaasa hirmaachisuu (mari’achiisuu)
2. hayyoota beekkomsa olaanaa qaban (highly trained
experts) hirmaachisuu (mari’achiisuu)
3. barsiiftota hirmaachisuu (mari’achiisuu)
4. barattoota hirmaachisuu (mari’achiisuu)
Waa’ee guddina Afaan keenyaa ilaalchisee, murteessaan hayyoota keenyaa fi saba keena malee, “KOMPUTARRI” (computer) akkasi jedha, jechuudhaan waan jaarraa 21ffaa waliin hin deemne irratti haasa’uun nama saalfachiisa. Yoma wanti biyyoota guddatan irraa fudhannu jiraates, akka jaarraa 19ffaa yaada alagaadhaa kan “Afaanii fi Aadaa” keenya waliin hin deemne fudhannee masakkamuu hin dandeenyu. “The Woyyaanee and its followers do not have their own world other than imitating the anachronistic method of foreigners.”
Woyyaaneenii fi dabbaloonni isiidha lafa teenya humnaan dhuunfatanii, qabeenya Waaqayyo ummata keenya badhaase saamanii, AFAAN, AADAA, DUUDHAA, SEENAA fi EENYUMMAA keenya balleessuudhaaf waan murteeffataniif, ummanni Oromoo osoo hin badiniin dura, akkuma asiin dura godhe san, tokkuummaadhaan ka’ee Mootummaa “Apartaayid” (Apartheid Regime) kana ofirraa buqqisuun barbaachisaadha.
Faashistummaan Woyyaanee yoommiyyuu caalaa jireenya Oromoo waan sodaachisuuf, galtuuwwaan bifa bineensaa jalatti buluun ga’uu qaba. Osoo hin badiniin dura diina balleessuun filannoo (murtii) ilmaan Oromoo isa dhumaa ta’uu qaba.
The Oromo nation will not negotiate its language in favour of the rule of Beasts
Previous Afaan Oromoo Fii OPDO
Next Tartiiba Qubeelee Afaan Oromoo jijjiiruudhaan kufaatii qulqullina barnootaa dandamachiisuun hin danda’amu.